बाबुरामले लेखे स्यानिटरी प्याडका कुराः रिस उठ्ला, एकछिन पर्खनोस् ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बाबुरामले लेखे स्यानिटरी प्याडका कुराः रिस उठ्ला, एकछिन पर्खनोस् !
बाबुरामले लेखे स्यानिटरी प्याडका कुराः रिस उठ्ला, एकछिन पर्खनोस् !
माघ १२ गते, २०७४ - १६:१४
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जाल चलाउने नेता मध्येका एक सक्रिय हुन् । कहिले राजनीतिका बिषय, आर्थिक, सम्वृद्धि त कहिले सामाजिक बिषयमा खुलेरै स्ट्याटस लेख्ने बाबुरामका पोष्टहरुले बेलाबेलामा विवाद ल्याउने त छँदैछ ।
बाबुरामले हिजो मात्रै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे जुन महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको बिषयमा थियो । कतिपयले बाबुरामको उक्त पोष्टमा राम्रा प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले नराम्रा प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । विवाद अाउने सोचेर नै हुनुपर्छ बाबुरामले माथि नै लेखेका छन् ‘पूर्व प्रमले स्यानिटरी प्याडबारे फेसबूक मार्फत चर्चा गर्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला, रिस उठ्ला ! एक छिन पर्खनोस् !’
बाबुरामको पोष्ट यस्तो छ-महिलाहरूले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडबारे देशको एउटा पूर्व प्रमले फेसबूक मार्फत चर्चा गर्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला, रिस उठ्ला ! एक छिन पर्खनोस् !
भारतीय गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय राजनीतिबारे बुझ्ने मनसायले टिभी च्यानल चाहार्दै जाँदा ZEENEWS को एउटा कार्यक्रमले मनमस्तिकमा नराम्रो झट्का दियो ! भारतका ४० करोडमध्ये १२ % महिलाले मात्र महिनावारी भएका बेला सुरक्षित स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दा रहेछन्; बाँकी ८८ % ले फोहोर कपडा, पराल, खरानी आदि प्रयोग गर्दा रहेछन् । जसका कारणले ७० % लाई विभिन्न यौनांगजन्य रोग लाग्दो रहेछ ! २४ % किशोरीहरू महिनावारी भएका बेला स्कूल नजादा रहेछन् । यसका विरूद्ध जनस्तरमा अभियान चलाउने र स्यानिटरी प्याड सर्वसुलभ रूपमा उपलव्ध गराउन सिर्जनात्मक आविष्कार गर्ने १६ जनालाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सम्मान दिइँदैरहेछ ! यसै विषयमा केन्द्रित एउटा फिल्म PadManपनि बनेको रहेछ !
के तपाईं हामीले हाम्रो देशमा यो समस्याबारे कहिल्यै सोचेकाछौं ? कहिलेकाहीं हामी मध्य र सुदूर-पश्चिमका विकट पहाडी जिल्लामा छाउपडी प्रथाद्वारा महिलाहरूको मृत्यु भएको समाचार सुन्छौं र केही दिन उद्वेलित हुन्छौं । तर गरीवी, अशिक्षा, अन्धविश्वासबाट ग्रसित हाम्रो समाजमा हाम्रा महिलाहरू सुरक्षित स्यानिटरी प्याडको अभावमा कति पीडाबाट गुज्रीरहेका होलान् र अकालमै मरिरहेका होलान् भन्ने कहिल्यै सोचेका छौं ?
अब सोच्न ढिलो र आलटाल नगरौं ! क्रान्ति, परिवर्तन, समृद्धि यस्तै ‘झिनामसिना’ र ‘अप्रिय’ कुराबाटै शुरू हुन्छन् भन्ने नभुलौं !! आगे जो मर्जी !!
माघ १२ गते, २०७४ - १६:१४ मा प्रकाशित